Visa any India ho an'ny olom-pirenen'i UK
Fahazoana visa e-Business Visa any India
Ny olom-pirenena UK dia afaka mangataka amin'ny India Visa Online
Ny olom-pirenena UK dia afaka mahazo visa e-Business
Ny olom-pirenena UK dia mankafy fidirana haingana amin'ny alàlan'ny programa e-Visa India
Raha mikasa ny hitsidika an'i India ianao ary ny tanjonao voalohany amin'ny dia dia orinasa na ara-barotra voajanahary, dia tsy maintsy mangataka izany ny olom-pirenena UK Visa any India e-Business. ny Business e-Visa ho an'i India dia antontan-taratasy ofisialy mamela ny fidirana sy fitetezana ao India ho an'ny tanjona ara-barotra na orinasa toy ny fanatrehana fivoriana ara-teknika / fandraharahana, fandraisana anjara amin'ny fampirantiana, fampiratiana / varotra sns.
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy tokony ho tonga any India amin'ny Tourist e-Visa (na e-Tourist Visa) ianao ary hanao hetsika ara-barotra. ny e-turista Visa natao ho an'ny tanjona voalohany amin'ny fizahan-tany ary tsy mamela ny asan'ny orinasa. Ny manam-pahefana misahana ny fifindra-monina Indiana dia nanamora ny fangatahana Business Visa tany India an-tserasera ary nahazo azy tamin'ny alàlan'ny mailaka. Alohan'ny hangatahanao Visa any India e-Business alao antoka fa mahalala ny antontan-taratasy ilaina ary fonosinay ao amin'ny lisitra eto ambany ireo. Amin'ny faran'ity lahatsoratra ity dia azonao atao ny mangataka amin'ny Visa e-Business India amin'ny fahatokiana.
Lisitra fanamarinana antontan-taratasy avy any Royaume-Uni ho an'ny Visa e-Business India
Passport - Ny pasipaoro UK dia tsy maintsy manan-kery mandritra ny enim-bolana farafahakeliny manomboka amin'ny daty fialana.
Fizahana pejy fampahalalana pasipaoro - Mila takelaka elektronikan'ny pejin'ny tantaram-piainana ianao - na sary avo lenta na scanna. Takiana aminao ny mampakatra an'io ho anisan'ny fizotry ny Application Business Visa any India.
Sarin'ny endrika niomerika - Takiana aminao ny mampakatra sary nomerika ho isan'ny fizotran'ny fangatahana amin'ny Internet Business Visa amin'ny Internet. Tokony haseho mazava tsara amin'ny endrikao ny sary.
Soso-kevitra mahasoa -
a. Aza ampiasaina indray ny sary avy amin'ny pasipaoronao.
b. Makà sarinao amin'ny rindrina tsotra amin'ny alàlan'ny telefaona na fakan-tsary.
Azonao atao ny mamaky amin'ny antsipiriany momba Fangatahana sary India Visa ary Fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny India visa.
Kopian'ny karatra Business - Takiana aminao ihany koa ny mampakatra kopian'ny kara-pandraharahanao. Raha tsy manana karatra fandraharahana ianao, dia afaka manome taratasim-pandraharahana avy amin'ny mpiara-miasa Indiana manazava ny fepetra takiana.
Raha tsy manana karatra fandraharahana ianao, farafaharatsiny mba ahafahanao manome ny anaranao, mailaka ary sonia.
vahoaka: + 206-582-1212
Antsipirian'ny orinasa indiana - Satria mitsidika ireo mpiara-miasa aminao any India ianao dia tokony hanana antsipirihany momba ny orinasam-pandraharahana Indiana toy ny anaran'ny orinasa, ny adiresin'ny orinasa ary ny tranokalan'ny orinasa.
Fepetra ilaina amin'ny Business Visa:
6. Adiresy mailaka:: Tokony hanana adiresy mailaka mety ianao izay hampiasaina mandritra ny fanodinana ny fampiharana. Raha vantany vao navoaka ny visa e-Business Indiana anao, dia halefa amin'ity adiresy mailaka nomenao tamin'ny fangatahanao ity.
7. Carte de crédit / debit na kaonty Paypal: Hamarino tsara fa manana carte de debit / Credit ianao (mety Visa / MasterCard / Amex) na koa kaonty UnionPay na PayPal ahafahana mandoa ary manana vola ampy izy io.
a. Raha atao amin'ny alàlan'ny vavahady fandoavam-bola Secure PayPal ny fandoavam-bola, azonao atao ny mampiasa ny Debit na CreditCard anao handoavana. Tsy voatery hanana kaonty PayPal ianao.
Mandra-pahoviana no manan-kery ny visa e-Business India?
Ny raharaham-barotra Indiana Visa dia manan-kery mandritra ny 365 andro hatramin'ny datin'ny namoahana azy. Ny fijanonana farany ambony any India amin'ny e-Visa Business (na Business Online Visa) dia 180 andro ny fitambarany ary Visa fidirana marobe izany.
Iza amin'ireo hetsika azo avela eo ambanin'ny India Business e-Visa ho an'ny teratany anglisy
Fametrahana orinasa indostrialy / orinasa.
Sale / fividianana / varotra.
Manatrika fivoriana ara-teknika / fandraharahana.
Mandray anjara amin'ny fampirantiana, fampirantiana / varotra.
Manam-pahaizana / manam-pahaizana manokana momba ny tetikasa mitohy.
Comission avo an'ny United Kingdom any New Delhi
Visa e-Business India avy any UK
Raha mpitsidika voalohany any India ianao dia fantaro misimisy kokoa Torohevitra ho an'ireo mpitsidika orinasa.